Xididga Monaco Fabinho oo Manchester City tooshka u saarantahay | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Xididga Monaco Fabinho oo Manchester City tooshka u saarantahay
(11-10-2017) Kooxda Manchester City ayaa ah kooxdii ugu danbeysay ee soo bandhigtay xiisaha ay uqabto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Fabinho isagoo ka soo tagaya Monaco bisha janaayo.
23 jirkaan ayaa la fahamsan yahay inuu ka mid yahay dookha uu doonayo tababaraha Manchester United ee bartilmaameedka u ah Jose Mourinho xagaagan, laakiin keliya Nemanja Matic ayaa buuxiyay baahidiisa.
Fabinho ayaa weli u muuqda inuu ka baxayo Stade Louis II marxaladaha soo socda ee suuqa kala iibsiga, iyadoo Paris Saint-Germain ay dooneyso inay labada ciyaaryahan heshiis la gaarto ciyaaryahanka reer France ee Kylian Mbappe.
ESPN waxa ay soo jeedineysaa in uu sii joogayo Monaco waqtigii uu joogay Real Madrid, waxaana doonaya kooxo badan oo Ingariis ah oo Man City ah.
Pep Guardiola ayaa lagu soo waramayaa inuu arko in uu ku bixiyo 67 milyan oo ginni oo lagu qiimeeyo Fabinho oo ah kabtanka labaad ee kooxda si uu ula dagaalamo Fernandinho, halka sidoo kale uu ku faraxsan yahay qaab ciyaareedkiisa taasoo u ogolaaneysa inuu booska hooseeyo marka loo baahdo.